मनोजलाई बधाई - मनोरञ्जन - साप्ताहिक
पछिल्ला केही महिनादेखि पारिवारिक तनावमा रहेका व्यंग्यकार मनोज गजुरेलले हालै एउटा खुसीको समाचार सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शनमार्फत पाएको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिसम्बन्धी उक्त समाचारबाट गजुरेल आफैं पनि उत्साहित छन् ।
कुनै बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखी योगगुरु रामदेवसम्मका व्यक्तित्वलाई दुरुस्त उतारेर चर्चामा आएका गजुरेलले पछिल्लो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नक्कल गरेका थिए ।
हाउभाउ, गेटअप, पहिरन तथा बोलीचाली नै नक्कल गरेर दुरुस्त डोनाल्ड ट्रम्प देखिएका गजुरेलले उक्त प्रस्तुति पहिलो पटक गत गाईजात्राका क्रममा काठमाडौंकै प्रज्ञा भवनमा दिएका थिए । दर्शकहरूले अत्यन्त रुचाएको गजुरेलको ट्रम्प अवतारले नेपाली मात्र होइन विदेशका सञ्चारमाध्यममा समेत राम्रो स्थान पायो । अमेरिकाकै सञ्चार माध्यमले समेत गजुरेलको उक्त कलाको प्रशंसा गरे । अहिले आएर अमेरिकाकै एउटा समाचार संस्थाले एउटा रोचक सूची सार्वजनिक गरेको छ । सीबीएस न्युजले विश्वका १८ जना कलाकारको सूची सार्वजनिक गरेको छ, जसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको क्यारिकेचर गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित :फाल्गुन २९, २०७४
पुरस्कार — पन्ध्र सय
मिस नेपालमा सहभागी सबैलाई बधाई छ
होलीमा ओलीको शुभकामना
'फेल’ हुनुभो ? ल बधाई छ !
यात्राको प्रेसरमा सलिन फाल्गुन २, २०७५
अनमोल केसी स्प्राइटका ब्रान्ड एम्बेसडर फाल्गुन १, २०७५
इन्गेजमेन्टसँगै फेरियो वर्षा र संजोगको नाम माघ २९, २०७५
जानी नजानीको कभर भिडियो प्रतियोगिता माघ २६, २०७५
साथी अरुणलाई संझदा भावुक भए विक्रम गुरुङ माघ २५, २०७५
पुरानो बुलेटको फस्ट लुक माघ २३, २०७५
के श्रद्धा नेपालकी बुहारी बन्लिन् ? माघ २३, २०७५
टप सेलिब्रेटीको पारिश्रमिक कहानी माघ २१, २०७५
बन्ने भो सरौतो माघ २१, २०७५
बुलबुलको अर्को दमदार गीत: जाद्रै बस्यो दिल माघ २०, २०७५